Xiisado ka taagan Deg. Matabaan
29 Jul 29, 2012 - 6:28:35 AM
Xiisado u dhexeeya Ururka Ahlusuna iyo Maamulka DF ee Gobolka Hiiraan ayaa ka taagan Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku haysay Ahlusuna, halkaasoo ay saakay aroortii hore ay la wareegeen ciidamada Gobolka Hiiraan oo taageersan DF iyadoo aysan wax dagaalo ah dhicin.
Ciidamo taabacsan Ahlusuna ayaa la sheegay inay gaareen deegaankaas ayna ka taagan yihiin xiisado colaadeed oo sababi kara inay labada dhinac dagaalamaan, iyadoo degmadaas uu ku sugan yahay gudoomiyu uu maamulka Gobolka Hiiraan u magacaabay degmadaas.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Matabaan ayaa sheegay in mararka qaarkood laga maqlayo gudaha degmadaas rasaas ay ridayaan ciidamada iska soo horjeeda ee ku sugan degmadaas.
"Saakay ayaa waxaa degmada soo galay ciidamo gaadiid dagaal wata oo ka yimid Baladweyne, hadana waxay ku sugan yihiin gudaha degmada, inkastoo xiisado la dareemayo" ayuu yiri goobjooge ku sugan degmada Matabaan.
Wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan inay dagaalo dhaceen, balse taas ma aysan xaqiijin dadka ku sugan gudaha degmadaas, waxaana xiisada degmadaas ka taagan ay noqonaysaa tii ugu horeysay oo soo dhexgasha ciidamada DF ee ka amar qaata Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Xoogaga Ururka Ahlusuna.
Degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhowr sano gacanta ku ka talinayay Ahlusuna, iyadoo ciidamo yar oo saakay ku sugnaa degmadaas ay ku amareen kuwa dowlada inay halkaas isaga tagaan, taasoo keentay in ciidamo ka tirsan Ahlusuna ay ka yimaadaan Degmada Guriceel.
Xukuumada Somalia oo dhawaan u magacowday Gobolka Galguduud oo ay ka taliso Ahlusuna maamul ayaan ka hadlin xiisadaha ka taagan Degmada Matabaan, iyadoo la saadaalinayo in dagaalkan uu sababi karo khilaaf soo dhexgala DF iyo Ahlusuna.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa tan iyo markii la magacaabay wuxuu ku goodinayay in Degmooyinka Gobolkaas ka tirsan ee aysan gacanta ku hayn ay la wareegi doonaan, iyadoo talaabadan ay noqonayso tii ugu horeysay oo uu maamulkaas qaaday.
Sadex degmo oo lagu daray JPLG